विद्यालय नै अभिभावक « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०७७, सोमबार २२:५३
पाँचथर । फिदिम नगरपालिका–४ सालघारीमा रहेको जागृति आधारभूत विद्यालय कहिल्यै विदा हुँदैन । यहाँ सधैँ विद्यार्थीहरु भेला हुन्छन् र पढ्छन् । प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु प्रायः विद्यालयमै रहन्छन् । साहराविहीन २५ जना विद्यार्थीलाई आवाशमा राखेर पढाउँदै आएको यस विद्यालयमा विहान बेलुकी अरु विद्यार्थीहरु समेत भेला हुन्छन् ।
आवाशमा नबसेका विद्यार्थीहरु मध्ये दैनिक १० देखि १५ जनाले विहानको खाना विद्यालयमै खान्छन् । आवाशका अधिकांश विद्यार्थीहरु न कहिल्यै घर जान्छन् न आफन्तकहाँ नै । उनीहरुका लागि विद्यालय नै घर, आफन्त र अभिभावक हो । विहान बेलुकी विद्यार्थीहरु विद्यालयमै रहन्छन् र गृहकार्य गर्छन् ।
फिदिम नगरपालिका सहित हिलिहाङ र कुम्मायक गाउँपालिकाका १६२ घरधुरी सेवा क्षेत्र रहेको यस विद्यालयमा १०३ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । सेवा क्षेत्रमा माझी, तामाङ, राई, लिम्बू र दलित समुदायको बसोबास छ । प्रधानाध्यापक डिल्लीराम लुइटेलका अनुसार बालविवाहदेखि बहुविवाहसम्मका अनेकन समस्याले झेलिएको गाउँमा बालबालिका बेवारिसे हुने क्रम ब्याप्त छ ।
सेवा क्षेत्रका एक दर्जन बढी बालबालिका अभिभावकका कारण विद्यालय आउन नसकेको पाएपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सहयोगमा यस विद्यालयले वि.सं. २०७२ सालबाट आवाशको ब्यवस्था गरेको थियो । साहराविहीन विद्यार्थीलाई विद्यालयमै राखेर पठन–पाठन गराउँदै आएको यो विद्यालयले शिक्षा दिने कार्यमा मात्र सिमित नभई अभिभावकीय दायित्व समेत पूरा गरिरहेको छ । शनिवार होस् वा सार्वजनिक विदा, चाडपर्व होस् वा बन्द हड्ताल यो विद्यालयमा सधैँ पठन–पाठन चलिरहन्छ ।
बेमतलबी अभिभावक, बालबालिकाको विचल्ली
कक्षा पाँचसम्म यहि विद्यालयमा अध्ययन गरेकी विद्यालय नजिकै घर भएकी तामाङ परिवारकी एक किशोरीले १४ वर्ष नपुग्दै विवाह गरिन । फिदिम नगरपालिका–९ लुम्फाबुङका राई परिवारका युवकसँग विवाह गरेकी उनले वर्षदिन नपुग्दै छोरो जन्माइन । छोरो जन्मिएपछि उनी माइतीमै बसिन । युवकले माइतीमा बसेकी श्रीमती र छोरोलाई छोडेर हिँडे ।
किशोरी श्रीमानको घर जान सकिनन् । उनीहरुवीच ब्यवहारिक रुपमा सम्बन्ध विच्छेद भयो । माइतीमै बसेर छोरो आर्यन राईलाई हुर्काउँदै गरेकी किशोरीको लमजुङ घर भई यहाँ पुल निर्माणका लागि आएका भुजेल थरका एक युवकसँग माया बस्यो । उनीहरुवीच बिवाह भयो । काखको नानी माइतीमै छोडेर उनी लमजुङ पुगिन । अनि लमजुङमा अर्को छोरो जन्माइन । तर श्रीमानसँगको सम्बन्ध राम्रो नभएपछि माइती फर्किइन, छोरो शिशिर भुजेललाई च्यापेर ।
दुई छोरासहित माइतीमा बसेकी किशोरीले पुनः पहिलो श्रीमानसँग विवाह गरिन । किशोरीको पहिलो श्रीमानले उनीलाई छाडेको समयमा अर्को विवाह पनि गरिसकेकाले उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । माइतीमा दुई जना छोरा आर्यन राई र शिशिर भुजेल अलपत्र छाडेर किशोरी रोजगारीका लागि पोखरा पुगिन ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनका माइती पक्षले बालकहरुलाई समयमा खाना खुवाउन, विद्यालय पठाउन तथा हेरचाह गर्न सकेनन् । बालकहरु अलपत्र परे । जागृति आ.वि.ले आवाशीय विद्यालय सञ्चालन गर्न थालेपछि उनीहरुलाई आवाशमा ल्याएर राखियो । अहिले आर्यन राई १० वर्षका भए भने शिशिर भुजेल सात वर्षका । विद्यालयको आवाशमा बसेर पढ्दै गरेका शिशिर भुजेलले आफ्नो बावु देख्नसमेत पाएका छैनन् ।
सात वर्षकी आयुषा राई विद्यालयको आवाशमा बसेर कक्षा एकमा पढ्दैछिन । आयुषा तेह्रथुमको आठराईमा जन्मेकी थिइन् । तर उनकी आमाले आर्यन राईका बावुसँग दोश्रो विवाह गरेपछि उनी फिदिम–९ लुम्फाबुङ आइन् । आर्यन जन्मिएर मावलीमै रहेका बेला उनका बावुसँग आयुषाकी आमासँग विवाह गरेका थिए । आयुषा आमासँगै झट्केलो बावुको घर पुगिन । तर केही वर्षमै आयुषाकी आमाले आर्यनका बावुलाई पनि छोडेर अर्को विवाह गरेपछि उनी अलपत्र परिन ।
प्रधानाध्यापक लुइटेलका अनुसार विद्यालयको सेवा क्षेत्र फिदिम–कुम्मायकको सीमाना सिवादोभानमा घर चाहर्दै बसेकी आयुषालाई शिक्षकहरुले भेटे र आवाशमा ल्याएर राखे । अहिले उनीहरु तीनै जना आर्यन राई, शिशिर भुजेल र आयुषा राई आवाशमा बसेर पढिरहेका छन् ।
उनीहरुजस्तै २५ जना बालबालिका विद्यालयको आवाशमा छन् । अभिभावकहरुलाई छोरा–छोरीप्रति कुनै चासो र चिन्ता छैन् । यो विद्यालय, शिक्षकहरु र सहयोगी कर्मचारीहरु नै यी साहराविहीन बालबालिकाका अभिभावक बनेका छन् ।
निर्दोष बालिबालिकाका दुःख यतिमा मात्रै सिमित छैनन् । कक्षा २ मा पढ्ने निरुता ओलीले बावुको अनुहार देख्न पाइकी छैनन् । पश्चिम नेपाल घर भएका उनका बावु ढुवानीको साधनको चालक भएर फिदिम–४ माझीटार आइपुगेका थिए । तामाङ परिवारकी निरुताकी आमाले १४ वर्षको उमेरमा ती सवारी चालकसँग विवाह गरेकी थिइन ।
विवाहपछि उनीहरु पोखरा गएर बसे । पोखरामा जन्मिएकी निरुता र उनकी आमालाई बावुले छोडेर हिँडे । आमाले निरुतालाई माइतीमा ल्याएर राखिन र रोजगारीका लागि पोखरा फर्किइन । मावलीमा बसेकी निरुताले पढ्ने वातावरण पाउन विद्यालयको आवाश नै आइपुग्नु प¥यो । नौ वर्षकी उनी दुई वर्षदेखि आवाशमा बसिरहेकी छन् । “अब छिट्टै ममी आउनुहुन्छ रे”, विद्यालयको आवाशमा भेटिएको निरुताले भनिन् ।
फिदिम–५ स्थायी घर भएका १२ वर्षका मिसन तुम्बापो फिदिम–९ सिवादोभानमा मावलीका वृद्ध हजुरबुवा हजुरआमासँग बसेका थिए । विद्यालय जानसक्ने अवस्था थिएन । शिक्षकहरुले भेटेर उनीलाई आवाशमा ल्याए । अहिले उनी कक्षा चारमा पढ्दैछन् । उनका बावु र आमाले कति वटा विवाह गरेभन्ने टुङ्गो छैन् । उनकी आमाको चौथो विवाहपछि मिसन जन्मिएको बुझिएको शिक्षकहरु वताउँछन् ।
मावली वा आफन्तकहाँ केही काम परे मिसन त्यता जान्छन् । तर धेरै समय बस्दैनन् र गइरहन पनि रुचाउँदैनन् । उनका लागि खुशी र आफ्नोपना जागृति आधारभूत विद्यालयको आवाशमै छ । “चाडपर्व, विवाह, भतेर आदिमा पठाइदिन्छौँ”, प्रधानाध्यापक लुइटेलले भन्नुभयो, “तर उनी विद्यालयमा बस्न नै खुशी मान्छन् ।”
बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन आवाशीय ब्यवस्था
यो विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा हिलिहाङ गाउँपालिकाका माझीटार, तम्फुवा र सीमखर्क, फिदिम नगरपालिकाका माझीटार, सालघारी, सरखण्डे र शिवादोभान तथा कुम्मायक गाउँपालिकाको निवुदोभान लगायतका टोलहरु पर्दछन् । गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताले यहाँका किशोर–किशोरीहरुले १४–१५ वर्षमै विवाह गर्छन् ।
“जवान पुग्दा ३–४ जना नानीका आमा–बावु भइसकेका हुन्छन्”, प्रधानाध्यापक लुइटेलले भन्नुभयो, “बुझ्ने भएपछि खटपट हुन्छ र अर्को बिवाह गर्छन् ।” अधिकांशको यहि चक्रले उनीहरुका नानीहरु बेवारिसे हुने गरेका छन् । “एक त दोश्रो बिवाह वा बहुबिवाहका कारण बालबालिका पीडित छन् भने अर्कोतर्फ विहान–बेलुकी भातै खान नसक्ने अवस्थाका परिवारले नानीहरुलाई विद्यालय पठाउन सक्ने नै भएनन्”, प्रधानाध्यापक लुइटेलले भन्नुभयो ।
सेवा क्षेत्रका विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय आउन नसक्ने अवस्था देखेपछि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालले साथ दिएपछि आवाश निर्माण थालिएको थियो । शिक्षा कार्यालय र जिल्ला विकास समितिबाट विभिन्न शीर्षकमा आएको बजेटबाट तीन कोठे भवन बनाई विद्यार्थी राखिएको प्रधानाध्यापक लुइटेल सम्झनुहुन्छ ।
वि.सं. २०७२ सालमा १३ जनाबाट सुरुआत भएको उक्त आवाश एक वर्षभित्र झण्डै–झण्डै बन्द भएको थियो । “राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा हामीले कहिँबाट बजेत पाउन नसक्दा झण्डै बन्द नै गर्नुप¥यो”, प्रधानाध्यापक लुइटेलले भन्नुभयो, “कोही आफन्त वा साहरा दिने अभिभावक भेटिएका बालबालिकालाई घर पनि फर्कायौं ।”
बजेट अभावले आवाशमा एक समय छ जना मात्रै विद्यार्थी पनि राखिएको थियो । एक जना सहयोगीलाई मासिक रु. ३००० पारिश्रमिक दिएर बालबालिकाको हेरचाह गर्न राखिएको लुइटेल सम्झनुहुन्छ । “लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नसम्म मागेर पनि बालबालिकाको पढाई धान्यौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सो समयमा पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष मित्रप्रसाद काफ्ले लगायतले गरेको सहयोग आफूले सधैँ सम्झिरहने लुइटेलको भनाई छ ।
स्थानीय तह निर्माणपछि भने फिदिम नगरपालिकाले आवाश सञ्चालनमा भरथेग गर्दै गर्न थाल्यो । आवाशमा बसेर पढेका विद्यार्थीहरु अहिले कक्षा नौ मा पुगेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश फिदिम–४ स्थित सुखबोध माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययरत छन् । “यहाँ बसेका धेरै विद्यार्थीहरु तीक्ष्ण क्षमताका छन्”, लुइटेलले भन्नुभयो, “केही त कक्षामा निरन्तर उत्कृष्ट भइरहेका छन् ।”
विद्यालयलाई सधैँ अभावै अभाव
विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि फिदिम नगरपालिकाले आवाशीय विद्यालय सञ्चालनका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ । नगरपालिकाले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा विभिन्न शिर्षकमा क्रमशः रु. तीन लाख र पाँच लाख बजेट दिएको थियो । चालु आ.व.मा भने आवाशीय विद्यालय सञ्चालनकै लागि भनेर रु. ५ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ ।
तर यति बजेटले आवाश सञ्चालनको खर्च धान्न कठिन परेको प्रधानाध्यापक लुइटेलको गुनासो छ । आवाशमा बस्ने विद्यार्थीको हेरचाह तथा विहान–बेलुकी पठन–पाठन गराउने एक जना शिक्षिका, एक जना वार्डेनलाई तलब समेत सोही बजेटबाट दिनुपर्ने बाध्यता छ । विद्यालयसँग अन्य आर्थिक स्रोत नहुँदा आवाश सञ्चालन कठिन भएको उहाँको भनाई छ ।
“आवाशमा बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्दा दैनिक न्यूनतम रु. १८०० खर्च आउँछ”, लुइटेलले भन्नुभयो, “विद्युत, लत्ताकपडा, स्वास्थ्य सेवा आदिमा उत्तिकै खर्च लाग्छ ।” बालबालिकाको हेरचाह गर्ने, खाना दिएर विद्यालय पठाउन समेत नसक्ने अवस्थाका परिवारका बालबालिकालाई मात्रै आवाशमा राखिएको प्रधानाध्यापक लुइटेल भनाई छ । “यत्तिको ब्यवस्था पनि नभएका घरका नानीहरुलाई मात्रै यहाँ राखेका हौँ”, लुइटेलले भन्नुभयो, “समस्या भोगिरहेका विद्यार्थीको संख्या त ठूलो छ ।” चलाउनैपर्ने बाध्यताले मात्रै आवाश चलेको लुइटेलको प्रष्टिकरण छ ।
बालबालिकाको हेरचाह उत्तिकै कठिन
आवाशमा बस्ने सात वर्षदेखि १४ वर्षका २५ जना बालबालिकाको हेरचाहको जिम्मा शिक्षिका मालिका सुब्बा र वार्डेन विमला तामाङको हो । “विहानदेखि राती नसुत्दासम्म उनीहरुको खानपान, सरसफाई, पढाई लगायतमा हामी तल्लीन हुन्छौँ”, शिक्षिका सुब्बाले भन्नुभयो, “दुई जनाले यति धेरै काम गर्न कठिन पर्ने गरेको छ ।”
बाहिर हिँड्न नदिनेदेखि माया ममता दिने दायित्व पनि विद्यालय परिवारको छ । “नसक्ने बालबालिकाका कपडा समेत मैले धोइदिनु पर्छ । विहानदेखि बेलुकीसम्म चार साँझ खानेकुरा बनाउन र सरसफाई गर्न नै हम्मेहम्मे पर्छ”, वार्डेन विमला तामाङले भन्नुभयो । धेरै विद्यार्थीहरु रहेकाले आफूले समेत प्रायः विद्यालय छोड्न नपाउने प्रधानाध्यापक लुइटेलको भनाई छ ।
एक महिनाअघि मध्यरात शिक्षिका सुब्बाले प्रधानाध्यापक लुइटेललाई फोन गरेर आवाशमा बसेको विद्यार्थी १४ वर्षीय फुङ्सो जबेगू हराएको सुनाउनुभयो । आठ किलोमिटर टाढा घरबाट मोटरसाइकलमा विद्यालयतर्फ आउँदै गर्दा विद्यालयभन्दा करीब दुई किलोमिटर पर हिँडिरहेको अवस्थामा लुइटेलले आफ्नो विद्यार्थी भेट्नुभयो । साथीसँग झगडा परेपछि शौचालय जान्छु भनेर हिँडेका विद्यार्थी फिदिमतर्फ जाँदै गरेका भेटिएका थिए । “यस प्रकारका घटना त भइरहन्छन् । थोरै मान्छेले धेरै विद्यार्थी सम्हाल्न निकै कठिन परेको छ”, प्रधानाध्यापक लुइटेलले भन्नुभयो ।
शिक्षक र सहयोगीको स्थायी दरबन्दी दिन माग
सरकारी ब्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी कायम हुन्छ । पछिल्लो सातामात्रै फिदिम नगरपालिकाले विद्यालयहरुमा दरबन्दी मिलानका लागि छलफल गरेको थियो । विद्यार्थी संख्या कम भएपनि स्थानीय समस्या बुझेर दरबन्दी थपिदिन आफूले आग्रह गरेको प्रधानाध्यापक लुइटेल वताउनुहुन्छ ।
“साथीहरु (अन्य विद्यालयका प्रधानाध्यापक) तपाईंको विद्यालयलाई पाँच लाख बजेट दिइएको छ । अरुले एक लाख पनि पाएका छैनौं भन्नुहुन्छ”, लुइटेलले भन्नुभयो, “तर हाम्रो समस्या कसैले बुझिदिएन ।” आवाश सञ्चालनको बजेटलाई वृद्धि गरी एक जना शिक्षक र एक जना सहयोगीको दरबन्दी पाए विद्यालय सञ्चालन सहज हुने लुइटेलको भनाई छ ।
कक्षा छ सम्म चलेको विद्यालयमा अहिले चार जना शिक्षक दरबन्दी तथा एक जना अन्य स्रोतबाट शिक्षक राखिएका छन् । आवाश सहज रुपमा सञ्चालनका लागि थप सहयोग गर्न फिदिम नगरपालिकामा आफूले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको उहाँको भनाई छ । “मैले यहाँ पढाएको २० वर्ष भयो । कुनै पनि अभिभावकले कुनै सहयोग जुटाउन सक्ने अवस्था छैन्”, लुइटेलले भन्नुभयो, “म एउटा धाएको धाएकै छु ।” पूर्वाधारदेखि आवाशका लागि सहयोग गर्न दलका कार्यकर्ताहरु मार्फत प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरेपनि कसैबाट सम्बोधन नभएको उहाँको दुःखेसो छ । “मेरो पहुँच नभएर हो कि के हो थाहा भएन्”, लुइटेलले भन्नुभयो, “तर यस्तो बेहाल रहेको विद्यालयलाई जिल्लाकै आर्थिक मामिला मन्त्रीले चासो दिनुभएन् ।”
उपल्लो कक्षा पढ्न झनै समस्या
जागृति आ.वि.ले अहिले कक्षा छ सम्म पठन–पाठन गराइरहेको छ । कक्षा ७ का लागि स्वीकृति दिन माग गर्दै निवेदन पनि दिएको छ । सदरमुकाम नजिकै भएपनि यहाँबाट अर्को विद्यालय पुग्न कम्तिमा डेढ घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । समयमा सवारीसाधन नपाइने समस्या त छँदै छ यहाँका अधिकांश परिवारले आफ्ना छोरा–छोरीलाई दैनिक भाडा तिरेर विद्यालय पठाउन नै सक्दैनन् । विद्यालय टाढा हुँदा धेरै विद्यार्थीले पढाई छोड्ने गरेको प्रधानाध्यापक लुइटेलले देख्नुभएको छ ।
“एक/दुई दिन ट्र«्याक्टरमा झुण्डिएर जान्छन् । कहिले गाडी कुर्दा कुर्दै बाटोमै १० बज्छ त कहिले हिँड्दाहिँड्दै भोकाउँछन्”, लुइटेलले भन्नुभयो, “त्यसपछि स्कूल जानै छाडिदिन्छन् ।” सेवा क्षेत्रका हिसाबले यो विद्यालयलाई कक्षा आठसम्म पु¥याउनैपर्ने आवश्यकता छ रहेको उहाँको भनाई छ । “नौ कक्षामा पुगेपछि उनीहरु आफैँ अलि बुझ्ने र परिपक्व हुन्छन् । पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना आउँछ र अर्काको घरमा काम सघाएर पनि पढ्न सक्छन्”, लुइटेलले भन्नुभयो, “यसतर्फ सरकारी निकायले सोचिदिउन् ।”